Trano fantsom-bokatra tsara indrindra ho an'ny famaritana machinina - TopFillers
Fikirakirana tavoahangy boribory
Home / Famaritana machinery / Fikirakirana tavoahangy boribory
Famaritana machinery, Fikirakirana tavoahangy boribory
Ny fampiasana fototra natokana ho an'ny faritra manodidina ny tavoahangy vita amin'ny tavoahangy mena, dia azo ampifandraisina amin'ny fenitra tokana sy dikan-tsoratra roa, dia miverina indroa ny halavam-pandrefesana afaka manitsy flexibilité; manana tetikady famaritana tavoahangy conical; Azo atao ny mamaritra ny toerana voatondro ao amin'ny mari-pamantarana mandrakotra ny tany. Application Applicable Tags: sarimihetsika adhesive / sticker. Ny vokatra azo ampiasaina: tavoahangy boribory misy diamonda eo amin'ny 25mm ~ 90mm Industry: fampiasana betsaka amin'ny divay, fanafody, sakafo, kilalao, kosmetika, ary indostria hafa. Fampiharana fampiharana: tavoahangy vita amin'ny tavoahangy Bordeaux, tari-dalao Tatu, fametahana an'i Remy, tavoahangy sarisarin'ny dian-danjan'ny standard etsy ...
Kitapo fingotra vita amin'ny labozia
Product Introduction 1. Ny taratasy fangatahana fampiharana dia tsy mitovy amin'ny singa boribory goavam-be ao amin'ny sakafo, ny fanafody, ny fanafody isan'andro sy ny orinasa maivana hafa. Hanao izany asa izany izy ireo: manamboatra tavoahangy → mametaka labels → marika voasintona → mifangaro → mofomamy mihodina sy manindrona. 2. Ny fitaovana tsirairay dia fitaovana elektrika, Fandefasana fehikibo, singa tapa-tavoahangy, vatomamy marika mipetaka, fitaovana famantarana ny vilany, famantarana ny motera, rafitra rafitra sy rafitra fanaraha-maso; Fitaovana fanenonan-tsarimihetsika vita amin'ny tavoahangy vidin'ny horonan-tsarimihetsika Videos Karazan-tsarimihetsika fiasa 1. 2) rafitra fandidiana: ny maintimolon'ny fiara 7 inch touch screen, direct visual interface mora, ...
Tavoahangy vita amin'ny tavoahangy vita amin'ny tavoahangy / Kitapo misy kodiarana
Main Features 1. Ny rafitra fanaraha-maso elektrika manontolo dia voafehin'ny PLC. Ny efijery mampihetsi-po dia amin'ny fiteny Shinoa sy Anglisy. 2. Manana fahafaha-mihetsika izy io ary afaka mitahiry vondrona paragrafy 30 sy anarana ho an'ny programa isan-karazany. 3. Fandefasana kapila, tapa-tavoahangy tapa-tavoahangy, manodina ny fihodinan'ny rotaka dia manamboatra fiara tsy miovaova. Ny lohan'ny famaham-bolongana dia mety ho tari-dalana maromaro. 4. Ny fanairana automatique dia hanome fampitandremana rehefa mijanona ny labels 200. Fanairana amin'ny alàlan'ny fampiasa ny labels, ary ny fiatoana dia tsy miasa intsony. 5. Mihatra amin'ny vokatra isan-karazany izany. Azo atao ny manitsy ny toerana sy ny sakana eo amin'ny sehatry ny tavoahangy.
Bottle labeling machinery ho an'ny varotra
Feon-tsarimihetsika 1.Automatic 2.Wide fampiharana 3.Sturdy label 4.ISO Bottle labeling machine ho an'ny tetikasam-paty vita amin'ny tavoahangy Mahaleotena dia ny milina fanoratana vaovao napetraka izay manana ny solosaina madinika - PLC (electronic optical fiber logic controller controller) hahatongavana marina haingana sy maharitra. Ny rindran-damosina manohina dia afaka manitsy ny marika hanampiana ireo mpiasa hanitsy sy hahazoana antoka ny angona amin'ny fotoana rehetra. Ary madio ny fanodinana labiera. Tena tsara tarehy ilay marika. Tondradrano vita amin'ny tavoahangy vita amin'ny tavoahangy Vidin'ny horonan-tsarimihetsiketsa voatondro ny tavoahangy misy tavoahangy vita amin'ny tavoahangy vita amin'ny tavoahangy amin'ny tavoahangy. Andininy No. OR-RL-001 Description Fihetsika automatique manontolo available 2800 * 1300 * 1850mm Color Silver Power ...
Fitaovana fanodinana milina fanodinana milina manara-doha
Product Description 1. Ny votoatin'ny fangatahana fampiharana dia tsy mitovy amin'ny fitahirizana rindran-tsakafo ao amin'ny sakafo, ny fanafody, ny fanafody isan'andro sy ny indostria maivana hafa. 2. Fanamboarana fitaovana elektrika kabinetra, fitaovana fampitaovana, singa tavoahangy samihafa, fitaovana fanoratana miloko, fitaovana famantarana ny vilany, 1 # marika fanoratana, rafitra rafitra sy rafitra fanaraha-maso; 3. Fitaovana fiasa momba ny fitaovana 1) Rafitra fanaraha-maso: Ampiasao ny rafitra fanaraha-maso PLC marika SIEMENS, miaraka amin'ny hetsika mafy orina ary tsy dia mahomby loatra. 2) rafitra fandidiana: ny ordinatera lehilahy manara-penitra 7 inch touch, direct visual interface tsotra, miaraka amin'ny fiteny roa Shinoa sy Anglisy roa, koa manankarena amin'ny ny fanampiana asa sy ny fiatrehana ny asany. 3) Mamaritra ny rafitra: Ampiasao ny karatra LEUZE German ...
Kitapo fanontam-batana fanontam-pirinty vita amin'ny labiera ho an'ny boaty
Fampidirana 1.1 Mpandraharaha mpanamboatra lozisialy mahery vaika dia manaparitaka ireo fitaovana fiara mifamatotra miaraka amin'ny alim-bary sy ravin-tsolika tsy ara-dalàna ho an'ny asa fanompoana maharitra. 1.2 Maro ireo fitaovana fametrahana vokatra azo avy amin'ny vokatra azo ampiasaina izay manome sehatra marim-pototra sy fitsinjarana. Azo ampiasaina irery izy io na fametrahana haingam-pandehan'ny fitaovana fanenana an-tsokosoko. Ny 1.3 Advanced Advanced torque mikarantsara mikararana mikarantsara dia ahitana ny taham-pifanarahana sy ny haingam-pandeha manaraka ho an'ny fampiharana marina sy azo antoka amin'ny fitaovana marika isan-karazany. 1.4 Natokana ho an'ny fampiharana ny labozia misy eo aloha sy / na miaraka amin'ny fahafahana mametaka ireo container izay manodidina, boribory, oval na rectangular.anor ny fampiharana ...
Kitapo roa vita amin'ny diplaoma maimaim-poana miloko mena ho an'ny tavoahangy vita amin'ny plastika
Product Description 1. Isika voalohany no mampiasa ny rafitra serivisy serivisy haingam-pandeha manerana an'i Azia amin'ny 1980. 2. Azo ampiasaina amin'ny tavoahangy isan-karazany, toy ny tavoahangy, taper, boribory, tavoahangy, sns. 3. Rafitra fanoritana avo lenta, miaraka amin'ny mari-pamantarana mazava ≤ ± 1mm. 4. Toby henjana: tavoahangy 0-300 / min. 5.Korrection mechnism amin'ny rojo synchronic mba ahazoana antoka ny toerana mendrika rehefa nanitsy ny tavoahangy. 6. Ny fitaovana fanerena ambony miaraka amin'ny fampisehoana nomerika, ary ny habetsaham-pamokarana lehibe, dia mety amin'ny tavoahangy manokana. 7.Universal rafitra fanitsiana ny fametahana ny lohan-doha, mamela ny mari-pamantarana marika ho an'ny karazan-tavoahangy rehetra. 8. Ny kitapo manontolo dia manamboatra SUS304 tsy misy vy ary A6061high-aluminio ...
Kitapo feno milina fanontam-pirinty manontolo
Ny vokatra eo amin'ny tavoahangin-tsolika feno amin'ny famolavolana tapa-taratasy manapariaka ny fampiharana ny mari-pamantarana maodim-piteny dia mifanaraka amin'ny vokatra azo avy amin'ny kodiaran-droa, teboka, karea, kônôma ao amin'ny Cosmetic, sakafo, pharmaceutical ary ny orinasa maivana hafa, mametaka amin'ny sisiny roa ny lafiny roa amin'ny rehetra araka ny filàn'ny mpanjifa. Ny singa 1. Ny masajy manontolo sy ny tsinjara dia mampiasa ny standard internationale standard SUS304 imported materialite fitsaboana fanodinana akodika, miaraka amin'ny fanoherana mahery vaika sy tsy misy solifara, akanjo ho an'ny tontolo famokarana. 2.German fanoratana milina fanoratana etsy ambony dia tsy azo atao, mandroso ny fanaraha-maso ny rafitra fanaraha-maso, manatsara sy manatsara ny miasa sy manitsy, manatsara ny fahaiza-manao, Rehefa vita ny vokatra fanovana na ny mari-pamantarana, ny fanitsiana tsotra dia tsara, tsy manana fepetra maro ho an'ny fahaizana asa. 3.Separate tavoahangy ...
Kitapo madinidinika madinika
Main Features 1.Suitable amin'ny fametahana ny tavoahangy boribory amin'ny habe hafa.2. Ny kalitao avo dia avo avokoa ny tranokala 2. Famaritana ny tavoahangy azo atao, mifanatrika tsy tapaka alohan'ny aorian'ilay fanoratana ny fitaovana ilaina. Ny 3.Efficience dia ambony tahaka ny 50 fotoana / minitra. 4.Kompana amin'ny vatany lehibe, mandefa taratasy, mandray taratasy, tondroina ho an'ny tavoahangy sns. 5.Mampiasa ilay tavoahangy amin'ny rindrina amin'ny rindrina ary manamboatra ilay tavoahangy. 6.Labeling ny vokatra dia tonga lafatra, tsy misy teboka, tsy misy bubble, avo lenta, hampitombo ny fifaninanana vokatra. 7.The marika PLC sy sensor ho an'ny elektronika components, ny fampiharana azo antoka kokoa. 8.Modular endrika, ambany ny fikojakojana sy ny fanamboarana mora. 9.High accuracy sy haingam-pandeha, fandefasana & ...
Tavoahangy vita amin'ny tavoahangy vita amin'ny tavoahangy fanoratana ho an'ny rindrina sy kianja
automatique tavoahangy tavoahangy mamorona milina amin'ny randrana sy ny efamira 1) Azo ampiasaina amin'ny fanoratana ny moron-tsofoka manontolo na sava-tapitrisa boribory amin'ny rondantanana izay tsy mahazaka azy amin'ny fetiny miaraka amin'ny fehiny fohy; 2) Advanved manova ny interface-ny interface-tsotra izay mora sy manam-pahaizana hanatontosa ary manana asa feno, anisan'izany ny fanampiana an-tserasera; 3) Ny famolavolana paikady fanodinana fandefasana manokana sy ny fampitaovana amin'ny alàlan'ny kodiarana tsy matevina dia mahatonga ny zavatra hikorontana ho azy; 4) Asa atao amin'ny famantaran'ny fototarazo, toy ny fandefasana ny fametahana tsy misy zavatra ao, ny fampiatoana mihazakazaka na ny fanairana alamy tsy misy labels ampiasaina mba hisorohana ny fametahana ...
Trano fanoratana milina fanontam-pirinty NPACK miaraka amin'ny mpanonta
Product Description 1. Ny votoatin'ny fampiharana Ny modely PLM-DLM104 Fikirakirana ny famantaranandro maoderina amin'ny vokatra mitovy amin'ny halavan'ny endrika, toy ny tavoahangy, siny, boasary amin'ny sakafo, fanafody, chemicals isan'andro ary ny indostrian'ny hazavana hafa. 2. Fanamboarana fitaovana elektrika kabinetra, fitaovana fampitaovana, singa tavoahangy samihafa, fitaovana fanoratana miloko, fitaovana famantarana ny vilany, 1 # marika fanoratana, rafitra rafitra sy rafitra fanaraha-maso; 3. Fitaovana fiasa momba ny fitaovana 1) Rafitra fanaraha-maso: Ampiasao ny rafitra fanaraha-maso PLC marika SIEMENS, miaraka amin'ny hetsika mafy orina ary tsy dia mahomby loatra. 2) rafitra fandidiana: ny ordinatera manara-penitra 7 inch, sary mivantana mivantana mora mora, amin'ny fiteny roa sy shinoa amin'ny fiteny roa, ary manankarena amin'ny fanampiana ...
Semi-automatique tavoahangy vita amin'ny tavoahangy boribory
Semi-automatique Rondin-tavoahangy mitentina antonontonony momba ny fampiharana azy Mifandraika amin'ny tavoahangy boribory sy tavoahangy bitika kely toy ny vahaolana amin'ny orana, xylitol, tavoahangy shampoo ary tavoahangy kosmetika. Azonao atao ny manamboatra labozia tokana sy dika mitovy amin'ny dika mitovy izay mety hahitsy ny elanelana; fampiasana betsaka amin'ny sakafo, fanafody, chemicals, elektronika, metaly, plastika ary indostria hafa; Ny 10-30mm 1mm 20mm 140-20mm ny hatevin'ny 200-10mm 350-10mm amin'ny 150 220mm 50 / 60Hz Ny lanjan'ny masom-boly 300W (LxWxH) 900mmx600mmx450mm vatomamy 33kg Tabilao fanoratana video Videos Quick Details Karazana: Famaritana ny fepetra momba ny fiasa: Fampiharana vaovao: Apparel, Beverage, Chemical, ...
1. Ny votoatin'ny fangatahana fampiharana dia tsy mitovy amin'ny fitahirizana rindran-tsakafo ao amin'ny sakafo, ny fanafody, ny fanafody isan'andro sy ny indostria maivana hafa. 2. Fanamboarana fitaovana elektrika kabinetra, fitaovana fampitaovana, singa tavoahangy samihafa, fitaovana fanoratana miloko, fitaovana famantarana ny vilany, 1 # marika fanoratana, rafitra rafitra sy rafitra fanaraha-maso; 3. Fitaovana fiasa momba ny fitaovana 1) Rafitra fanaraha-maso: Ampiasao ny rafitra fanaraha-maso PLC marika SIEMENS, miaraka amin'ny hetsika mafy orina ary tsy dia mahomby loatra. 2) rafitra fandidiana: ny ordinatera lehilahy manara-penitra 7 inch touch, direct visual interface tsotra, miaraka amin'ny fiteny roa Shinoa sy Anglisy roa, koa manankarena amin'ny ny fanampiana asa sy ny fiatrehana ny asany. 3) Mamaritra ny rafitra: Ampiasao ny fonosana famantarana LEUZE amin'ny alemà, ...
Fandefasana New Condition Fipoahana-solosaina LiquidFilling Machine
Pneumatic fangatahana milina kely famonosana milina famerenam-bola, semi-automatique fandefasana milina mena
Hery Famenoana Lehibe Fanampiana
Hazo fanondrahana ny seminera automatique vidin-tsolika
Afaka manamboatra milina famosaviana ny labiera